Raw Stanozolol (Winstrol) Soo-saareyaasha budada & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Root Stanozolol (Winstrol) budada (10418-03-8) waa daawada ugu fiican ee loogu talagalay kuwa doonaya inay yeeshaan murqyo adag oo caato ah. Daroogada waxaa badiyaa loo qaataa hadal ahaan jarista wareegyada si ay u caawiyaan dadka isticmaala luminta ama gubi dufanka jirka.
Raw Stanozolol (Winstrol) budada (10418-03-8) video
Raw Stanozolol (Winstrol) budada (10418-03-8) Sharaxaad
Root Stanozolol budada waa stabto anabolic loo isticmaalo si aad u hesho saafi iyo mid adag, waxaa badanaa loo isticmaalaa afka markaad jaranjarada si aad u lumiso dufanka jirka. Waa nooc ka mid ah Dihydrototestosterone (DHT), sidaa darteed waxaad filan kartaa faa'iidooyinka shidaalka ee la midka ah sida aad ubaahantahay wax kale oo steroid DHT ah. Isticmaalayaasha intooda badan, waa beddelaad ka duwan kan anavar, iyo, dabcan, waxay ka badan tahay suuqa madow. Isbedelka ku yimaada A-giraanta, tani waa steroid gaar ah, oo leh awood u goynta gaar ah. Tani waxay ka dhigaysaa budada winstrol ee Rawgaarka 3 ee ugu yareeya steroid suuqa.
Dufanka Root Winstrol wuxuu leeyahay awood awood u leh inuu hoos u dhigo qaddarka hormoonka galbeedka-globulin (SHBG), in ka badan wax kale oo steroid ah ee suuqa. SHBG waa hoormoon oo ku xidhan qalabka kale ee steroids ee wareeggaaga oo iyaga ka dhigaya wax aan faa'iido lahayn; marka la eego shuruudaha fudud, waxay keenaysaa in sterids-ka badanaa waxtar u yeeshaan maadaama ay ku takrifalaan. Si kastaba ha noqotee, budada stanozolol waxay kuu ogolaaneysaa inaad xaddido steroids badan oo wareeggaaga ah iyada oo aan loo baahnayn inaad hoos u dhigto qiyaastaada. Xayeysiin xiiso leh waxay noqon doontaa budada winstrol iyo ciriiriga, taas oo u oggolaaneysa dhimista ugu sarreysa SHBG iyo xoojinta waxqabadka wareegga.
Raw Stanozolol (Winstrol) budada (10418-03-8) Smamnuucista
Product Name Rood Stanozolol (Winstrol) budada
Magaca Kiimikada Winstrol, winny
brand NAme Dad badan oo
Molecular Wsideed 328.49
barafku Psaliid 242 ° C
Biological Life-Life Oral: Saacadaha 9; IM: Saacadaha 24 (aqb.
SOlubility Si tartiib ah biyo u xaaqi (1 mg / mL). Soluble ethanol (24 mg / mL).
Application Nooca steroid-ka samaysan, oo la mid ah tijaabada tijaabada ah ee dabiiciga ah. Kalluunka Raw Stanozolol waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurka anjioedema ee la iska dhaxlo
Waa maxay macdanta Raw Stanozolol (Winstrol) (10418-03-8)?
Stanozolol (10418-03-8) waa hoormoonka anabolis ee ku jira foomka dihydrototestosterone dihydrotestosterone (DHT). Isbedelka qaabdhismeedka waxaa lagu sameeyaa hoormoonka DTH-ka si loo yareeyo xoqida iyo xoqitaanka iyadoon la hagaajineynin dhismooyinka cuntooyinka dhirta ee uumiga ah kaas oo u oggolaanaya isticmaalayaasha inay yeeshaan murqaha caatada oo kor u qaada awoodda jirka guud. Stanozolol wuxuu ka baxaa foomamka afka iyo kuwa la isku duro oo macnaheedu yahay haddii aadan ku raaxaysnayn cirbadaha waxaad aadi kartaa qiyaasta afka. Daawada waa la soo saaraa oo lagu gadaa magaca caanka ah ee Winstrol. Saameynteeda ayaa daroogada ka dhigaysa mid ka mid ah seddexda ugu sareysa ee steroids ee ka mid ah jir-dhisayaasha iyo cayaaraha xirfadlayaasha ah. Dianabol waa steroid hogaaminaysa marka la eego natiijooyinka tayada leh, Deca-Durabolin oo qaadaneysa booska labaad kadibna Stanozolol ayaa degaya meel saddexaad.
Sida Raw Stanozolol (Winstrol) budada (10418-03-8) shuqullada
Stanozolol (10418-03-8) waa daawada ugu fiican ee loogu talagalay kuwa doonaya in ay yeeshaan murqyo adag oo caato ah. Daroogada waxaa badiyaa loo qaataa hadal ahaan jarista wareegyada si ay u caawiyaan dadka isticmaala luminta ama gubi dufanka jirka. Sida horay loo sheegay, daroogada waxay u shaqaysaa si la mid ah qiyaasaha kale ee DHT deriska ah ee stabdhabka. Dhaqdhaqaaqa badani waxay tixgeliyaan steroidkaan sidii ikhtiyaar u raqiisan Anavar iyo sidoo kale sida suurtagal ah ee suurtagal ah in lagu kordhiyo suuq madow suuqa. Beddelaadda A-barta wuxuu ka dhigayaa Winstrol steroid gaar ah oo leh awood u goynta. Sida badi badan oo ka mid ah DT-da la xidhiidha steroids, markaad isticmaasho Stanozolol, uma baahnid inaad ka walwasho daroogada bedeleysa estrogen kadib markaad jidhkaaga gasho. Waxaa sidoo kale jira xaqiiqo kale oo la yaab leh oo loo yaqaan 'Stanozolol' oo ay dad badani marar dhif ah ka hadlaan, taasina waa awoodda ay ku yarayn karto lipoproteins heerkul-maskaxeed (HDL) iyo sidoo kale kordhinta heerarka lipoproteins (LDL). Mid ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee Winstrol in dad badan oo isticmaala inta lagu jiro iyo ka dib dhammaystirka wareegga. Si kastaba ha ahaatee, HDL / LDL ilaa hadda waxay ka maqan yihiin taageero cilmi-baaris ah waxayna ku tiirsan yihiin warbixinno caddayn aan la isku halleyn karin.
Root Stanozolol (Winstrol) budada (10418-03-8) Qiyaasta
Qiyaasta Stanozolol ayaa lagu talinayaa in ragga ay ka kala yiraahdaan 40mgs ilaa 100mgs maalintii, halka haweenku ay kaliya qaadaan inta u dhaxeysa 5mgs iyo 15 mgs maalintii. Dumarka jecel inay qaataan qiyaasta sare, waa inaysan dhaafin 20mgs maalin kasta, qiyaastaasna waxaa lagu talinayaa kaliya oo loogu talagalay tartamada jimicsiga jirka ama kuwa jidh-dhiska. Ka hadlida qiyaasta xad-dhaafka ah ee dumarka waxay keeni kartaa saameyn ba'an sida kobcinta murqaha waaweyn iyo kuwa caanaha sida ragga. Ma jiro haweeney jeclaan lahayd in ay lahaato qof ragga oo kale ah, taasina waa khatarta qaadida steroid badan. U sheeg dhakhtarkaaga inuu kuu sheego sida loo qaato daawada saxda ah si loo helo natiijooyinka saxda ah ee kuu sahli kara inaad ku guulaysato xirfaddaada. Dadka cusub ee Winstrol waa inay bilaabaan qiyaas yar oo uu dhakhtarku dib u habeyn karo ka dib kormeerka horumarka. Wixii kuwa ku adag, heerarka waxay isticmaali karaan qiyaasta ugu badan ee Winstrol ama la hadal dhakhtarka haddii aysan jirin wax saameyn ah.
Dheefaha Raw Stanozolol (Winstrol) (10418-03-8)
Ahaanshaha steroid saddexaad ee ugu caansan, Gargaarka Stanozolol wuxuu ku yimaadaa faa'iidooyin kala duwan oo daroogada ka dhigaya daroogada ciyaaro badan iyo jir-dhiseyaal. Sidii hore u sheegnay, steroid waxaa markii hore loo isticmaalay ujeedooyin daaweyneed oo dheeraad ah si loo daaweeyo cudurka anjioedema iyo Osteoporosis. Ka dib markii la ogaaday in daroogadu ay sidoo kale ka caawin karto cayaaraha iyo jir-dhisayaasha inay hagaajiyaan waxqabadkooda waxa ay noqdeen kuwo caan ah oo ka mid ah ciyaartoyda tartamaya. Stanozolol wuxuu faa'iidooyin kala duwan u adeegsadaa isticmaalayaashiisa, waana sida soo socota;
(1) Stanozolol isma bedelaan estrogen, intooda ugu badan ee anabolic steroids marka ay gasho jirka waxay si deg deg ah ugu beddelaan estrogen. Si kastaba ha noqotee, Winstrol wuxuu u taagan yahay inuu ka mid noqdo stabdhabyada yar ee anabolic kaas oo aan isbeddelin xinjirta. Cudurka Estrogen wuxuu saameyn ku yeeshaa ragga sida horumarka naasaha dumarka. Sidaa daraadeed, ma haysatid sabab aadan walwal gelin markaad qaadanayso steroid this yaab leh.
(2) Waxay u suurtagelisaa dadka isticmaala inay horumariyaan murqaha tayada, Awoodda Winstrol si ay u bixiyaan kobaca muruqa tayada dadka isticmaala waxay noqon kartaa sabab kale oo muhiim ah sababta dhalinyaro badan iyo kuwo jidh-dhisiya ay doorbidaan. Si ka duwan noocyada kale ee anabolic anabolic taas oo hagaajineysa xajmiga muruqa, Stanozolol ayaa sidoo kale kordhiya xoojinta muruqa. Marka cunnida saxda ah iyo tababarka saxda ah la socoto wareegga, waxaad si deg deg ah u kobcin kartaa muruqyada cirridka oo xooggan, adag ahna leh. Haddii aad xiiseyneyso inaad dhisato murqahaaga, ka dibna Winstrol wuxuu kuu fududeynayaa doorashada.
(3) steroidku ma keeno wax heysto biyaha oo ka dhigaya mid ku habboon cayaaraha jirdhisleyda badan. Inta badan steroid laga heli karo suuqa maanta waxay keenaysaa in biyaha lagu hayo muruqyada muruqyada oo dadka u diidaya inay isticmaalaan murqaha jilicsan. Markaad sii wadato socdaalka muruqyadaada, uma baahnid inaad ka welwelisid wax kaydin ah markaad isticmaasho Stanozolol.
(4) Winstrol wuxuu siinayaa dadka isticmaala fursad ay ku doortaan sida ay u jecel yihiin in ay u isticmaalaan tan iyo inta ay ku jiraan foomamka afka iyo kuwa la isku duro. Dad badan ayaa ka baqaya in duritaanku sababo xanuunka, laakiin Stanozolol ayaa ku siinaya fursad aad ku raaxaysato waxtarka iyada oo aan loo marin irbado. Qiyaasta afka ayaa ku jirta kaniiniyada iyo dareeraha. Dhakhtarkaagu wuxuu kuu oggolaan doonaa inaad doorato nooca qiyaasta daawada aad jeceshahay. Markaad dejisid Winstrol laysku duro, hubso in dawo ama dhakhtar caafimaad uu maamulo dhammaan qiyaasaha. Ha samayn qalad ah inaad isku durto haddii aadan khibrad u lahayn.
(5) Macaash kale oo muhiim ah oo dadka isticmaala ku raaxaystaan ​​inta lagu jiro iyo ka dib wareegga Stanozolol ayaa la kulma natiijooyin dhakhso leh. Qaar badan oo steroids ayaa waqti qaadata ka hor intaysan isticmaalin natiijooyinka buuxda. Si kastaba ha noqotee, taasi ma dhicin marka aad qaadaneyso Winstrol, waqtiga aad buuxineyso wareegga koowaad, waxaad arki doontaa oo aad la kulmi doontaa natiijooyinka. Doorashada cuntada saxda ah iyo weliba la socoshada wareegga leh tababarka saxda ah, waxaad ku heli doontaa natiijooyinka waqtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah. Raac dhamaan tilmaamaha la soo jeediyey oo dhakhtarkaaga ka qayb geli geeddi-socodka oo dhan si natiijo wanaagsan oo degdeg ah.
Soo iibso Stanozolol (Winstrol) budada Buyaas.com
Spadari, A., Romagnoli, N., Predieri, PG, Borghetti, P., Cantoni, AM, & Corradi, A. (2013). Saameynta daaweynta gudaha ee stanozolol on maqaarka synovial iyo carjawda ee model ah ovine ee osteoarthritis. Cilmi-baarista sayniska caafimaadka xoolaha, 94(3), 379-387.
Solbach, P., Potthoff, A., Raatschen, HJ, Soudah, B., Lehmann, U., Schneider, A. & Vogel, A. (2015). Kansarka mindhicir-celiyaha ee tijaabada ah ee hepatocellular ee ku jira jirka jirka ah ee 29-da sanadka oo leh taariikh ku saabsan xadgudubka asaasiga ah ee anabolic androgenic: warbixinta kiis. BMC Gastroenterology, 15(1), 60.
Milhorn, HT (2018). Ku-tiirsanaanta Steroid-ka Anabolic. In Cudurrada Isticmaalka Maandooriyaha(pp. 179-185). Daadinta, Cham.
Choi, SM, & Lee, BM (2015). Qiimaynta amniga isbarbardhiga ah ee habka wax lagu kala soocayo ee istratiijiyeyaasha ah iyo hababka anabolic androgenic steroids. Fikrad khabiir ah oo ku saabsan ammaanka daroogada, 14(11), 1773-1785.